၂.၃။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စုံထောက်ခြင်း - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> Chapters > အခန်း ၅။ > ၂။ ကိုယ်ပိုင် ဒေတာဘေ့စ် တည်ဆောက်ခြင်း > ၂.၃။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စုံထောက်ခြင်း
သတင်းထောက်များအတွက် လိုအပ်နေသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ယင်းတို့အား စနစ်တကျ စုစည်းကိုင်တွယ်မှု၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူမှု၊ သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းတို့သည် အင်တာနက်ကြောင့် များစွာ မြင့်မားလာခဲ့သည်။ ထိုပရိုဂရမ်များထဲတွင် လူသိအများဆုံးမှာ DuckDuckGo နှင့် အခြား meta-crawlers များလည်း ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့က ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်(search engine) လေးငါးလုံးခန့်ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် မောင်းနှင်ထားနိုင်သည်။ မဆီမဆိုင်ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်မလာဘဲ အင်တာနက်တွင် ထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေနိုင်သည့် အလွယ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ရှာဖွေရေးစကားလုံးများ စကားစုများကို တိကျစွာရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ အများဆုံးရလဒ်များထွက်ပေါ်နိုင်စေရန် ရှာဖွေမှု preference ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ DuckDuckGo တွင် အချိန်၊ ဒေသနှင့် ဘာသာစကားတို့ကို စစ်ထုတ်ယူနိုင်သလို၊ တစ်ကြိမ်ရှာဖွေတိုင်း ရလဒ်အရေအတွက် တိကျစွာ ရရှိနိုင်သည့် သုတေသန နည်းများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးစကားလုံးများသည် သင့်အာရုံကို ပိုမိုစူးစိုက်စေနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ရံဖန်ရံခါတွင် ထိုရှာဖွေရေးစကားလုံးများသက်သက်ဖြင့် မလုံလောက်နိုင်ချေ။
ဥပမာ သင်သည် ဂျွန်စမစ်ဆိုသည့် လူတစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သုတေသန ပြုလုပ်နေပါက ဂျွန်စမစ်ဟု ရှာဖွေလိုက်ရုံသက်သက်ဖြင့် ထိုအမည်ပါဝင်သည့် ရာထောင်ချီသည့် အချက်အလက်များ အားလုံးကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်က ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုမျှများပြားသော ရလဒ်များထဲတွင် မွမ်းကျပ်သွားရသည်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် သင်ရှာဖွေလိုသည့် ဂျွန်စမစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများ (ဥပမာ – သူ၏ ဇာတိ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်) ကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေးရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် တွေ့ရှိချက်များကို စခရင်ရှော့တ် ရိုက်လိုပါက မသက်ဆိုင်သည့် tab များအားလုံးကို ပိတ်ထားဖို့ သတိထားရမည်။
သင့်အတွက် အလုပ်ဖြစ်စေမည့် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော၊ ပြန်လည်ရှာယူနိုင်သော ဒေတာဘေ့စ်ကို ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ထားခြင်းက ပိုကောင်းပါသည်။ အင်တာနက်မှ စာရွက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ အင်တာဗျူး အသံပြန်ကူးချက်များ သို့မဟုတ် မှတ်စုများကို သိမ်းဆည်းရာတွင်လည်းကောင်း နောင်တစ်ချိန် သတင်း အချက်အလက်များကို အလွယ်တကူ ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်အောင် စီစဉ်ထားရပါမည်။ ထို့အတွက် ရှေ့တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်သော ပရောဂျတ်စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာကိရိယာများကို အသုံးပြုကြည့်နိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အောက်ပါကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို စိတ်တွင်စွဲမြဲဖို့ လိုပါသည်။
! အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်ပါက မူရင်း စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်မည့် ရည်ညွှန်းချက်များ သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၊ လင့်ခ်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပါ။ အချက်အလက်များကို သင်ရှာဖွေထားပုံနှင့် အသုံးပြုပုံတို့အား ပွင့်လင်းမြင်သာရှိပါစေ။
! သင့်အချက်အလက်များကို မည်သည့်ရက်စွဲက ဖော်ပြထားကြောင်း စိစစ်ခြင်း အပါအဝင် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သတိရှိရှိ အတည်ပြုပါ။
! ကိန်းဂဏန်းနှင့် စာရင်းဇယား အချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ ကောက်ချက်စွဲပါ။ သင့်စာဖတ်ပရိသတ်က ပြန်လည်တွက်ချက်ကြည့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်တွက်ချက်မှုကိုသာ ယုံကြည်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
အချို့သော နည်းလမ်းများကို researchclinic.net သို့မဟုတ်